Ny fitantanana ny kalitao | GIS
Teny fitantanana ny kalitao] inona ny ISO?
ISO (International Organisation forStandardization) dia federaly iraisampirenena amin'ireo vondron-fenitra nasionaly (mpikambana ato amin'ny ISO). Ny asan'ny fanomanana ny fenitra iraisam-pirenena dia mazàna ny komity teknika ISO. Ny vondron'olona tsirairay izay liana amin'ny lohahevitra iray izay natsangan'ny komity teknika dia nanana zo hiombona an'io komity io. Ny fikambanam-pirenena iraisam-pirenena, ny fitondram-panjakana sy ny governemanta, miaraka amin'ny ISO dia mandray anjara amin'ny asa ihany koa. Ny ISOcollaborates dia miaraka amin'ny vaomiera iraisam-pirenena momba ny lozisialy elektronika (IEC) momba ny olana rehetra amin'ny fenitra ara-teknika.
Teny fitantanana ny kalitao] inona no fisafoana?
Hetsika toy ny fandrefesana, famakafakana, fitsapana fitandremana ny toetran'ny vokatra na serivisy iray, ary ny fampitahana ny theresulte miaraka amin'ny fepetra takiana mba hamaritana raha ampiharina amin'ny endriny tsirairay ny mifanaraka amin'ny endriny.
Teny fitantanana ny kalitao] inona no fisafoana tany am-boalohany?
Fanaraha-maso voalohany momba ny maro arakaraka ny fepetra voalazan'ity ampahany ity amin'ity laharana ISO 2859.NOTE Ity dia ny fanavahana ny fisafoana be dia be averina taorian'ny famoahana azy teo aloha.
Teny fitantanana ny kalitao] inona no fisafoana amin'ny toetra?
Fanaraha-maso izay misy ny singa dia voasokajy fotsiny ho toy ny fampifanarahana na fepetra tsy mifanaraka amin'ny fepetra takiana na ny fepetra takiana, na ny isan'ireo tsy fahatomombanana ao amin'io zavatra io dia fanamarihana.NOTE Ny fitsirihana amin'ny toetra dia ahitana ny fizahana maso ny fampifanarahana ny zavatra ary koa ny fanaraha-maso. isan'ny tsy an'asa isan-jatony.
Teny fitantanana ny kalitao] inona ny entana?
Zavatra izay azo faritana manokana sy kisary, EXAMPLES:
singa ara-batana; voafaritra ara-pitaovana; serivisy, hetsika na dingana; fikambanana na olona iray; na fifangaroana sasany ao.
Teny fitantanana ny kalitao] inona no tsy mifanaraka?
Tsy fanatanterahana fepetra takiana:
FANAMARIHANA 1 Amin'ny toe-javatra sasany voafaritra fepetra takiana mifanaraka amin'ny fepetra ilaina amin'ny mpanjifa (jereo kilema, 3.1.6). Amin'ny toe-javatra hafa dia mety tsy hifanaraka izy ireo, na somary mahery vaika kokoa, na ny tena fifandraisan'ny roa tonta dia tsy fantatra na tsy takatra tanteraka.
FANAMARIHANA 2 Ny tsy fahatomombanana amin'ny ankapobeny dia hanasokajy ny fahamatorany toy ny: Class A: ireo tsy fomban'ny karazan'antoka iray izay noeritreretina ambony indrindra; ho fanekena ny fandefasana ny tsy fanovana toy izany dia homena sata voafetra be dia be ny elanelana kely; noho izany, ireo dia azo omena fetra bebe kokoa momba ny elanelam-panekena lehibe kokoa izay manome lanja ireo ao amin'ny kilasy A ary kely kokoa noho ny ao amin'ny kilasy C, raha misy kilasy fahatelo, sns.
Fanamarihana 3 Ny fametrahana ny toetra sy ny kilasimn'ny fanamafisam-peo amin'ny ankapobeny dia misy fiantraikany amin'ny ankapobeny ny fahafahan'ny fanekena ny vokatra.
FANAMARIHANA 4 Ny isan'ireo kilasy, ny fanendrena an-tsitrapo, ary ny fahazoana ny fanekena ny fanekena momba ny kalitao ho an'ny kilasy tsirairay, dia tokony mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny toe-javatra manokana.
Teny fitantanana ny kalitao] inona no tsy mety？
Ny tsy fanatanterahana ny fangatahana fampiasana ilaina
fanamarihana CATETINA 1 Ny teny hoe "defect" dia mety ampiasaina raha toa ka tombana amin'ny lafiny fampiasana ny toetra iray momba ny vokatra na serivisy (raha ampitahaina amin'ny fanarahana azy ireo).
FANAMARIHANA 2 Satria ny dikan'ny hoe "defect" ankehitriny dia misy dikany voafaritra ao anatin'ny lalàna, dia tsy tokony ampiasaina amin'ny ankapobeny izy io.
Teny fitantanana ny kalitao] izay zavatra tsy fanovana？
laharana misy zavatra iray na maromaro tsy mifanaraka
FANAMARIHANA Ireo singa tsy fanovana amin'ny ankapobeny dia hanasokajy ny fahamatorany toy ny:
Kilasy A: singa iray izay misy tsy mifanaraka amin'ny kilasy A ary mety misy ihany koa ny tsy fahatomomban'ny kilasy B sy / na kilasy C, sns.;
Teny fitantanana ny kalitao] inona ny tsy fanovana ny isan-jato?
(Ao amin'ny santionany) zato heny ny isan'ireo zavatra tsy niova endrika tao amin'ilay santionany nizarazara habe tao amin'ny santionany, tamin'ny: (d / n) is100 izay
d: no isan'ny zavatra tsy
n: ny haben'ny santionany
Ny fitantanana ny kalitao] inona no fahefana tompon'andraikitra?
Hevitra izay ampiasaina amin'ny fitazonana ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ity ampahany ity amin'ny ISO 2859 (indrindra ho an'ny tanjona famaritana), tsy ankanavaka ny hoe voantso na ampiharina avy amin'ny antoko voalohany na faharoa na fahatelo
FARANY 1 ny manam-pahefana tompon'andraikitra dia:
a) ny sampana kalitao ao anaty fikambanan'ny mpamatsy (antoko voalohany);
b) Fikambanan'ny mpividy na ny fividianana (fety faharoa);
c) Manam-pahefana fanamarinana na fanamarinana (antoko fahatelo);
d) na inona na inona a), b) na c), tsy mitovy arakaraka ny fiasa (jereo Fanamarihana 2) araka ny voafaritry ny fifanarahana an-tsoratra eo anelanelan'ny ankolafy roa, ohatra ny antontan-taratasy iray eo anelanelan'ny mpamatsy sy mpividy.
Term Management Management term] firy?
Ny habetsaky ny vokatra, na fitaovana na serivisy, tsy azo arakaraka ny isan'ny vokatra na
Teny fitantanana ny kalitao] firy ny habeny?
Isan'ny zavatra be dia be
Teny fitantanana ny kalitao] inona ny santionany？
Mametraka zavatra iray na maromaro nalaina tamin'ny be dia be ary natao hanomezana vaovao momba ny antsapaka.
Teny fitantanana ny kalitao] inona ny drafitra santionany？
Fanambatra ny haben'ny santionany ampiasaina sy fepetra mifanaraka amin'ny fanekena betsaka
HAFATRA 1 Ny drafi-panabeazana tokana dia fitambaran'isa santionany ary fanekena sy isa nolavina.
Ny drafitra santionany indroa dia fitambaran'ny santionany roa ary fanekena sy fandavana ny santionany voalohany ary ho an'ny santionany mitambatra.
FANAMARIHANA 2 Ny drafi-panadihadiana iray dia tsy misy fitsipika momba ny fomba hisintonana ilay santionany.
Teny fitantanana ny kalitao] inona ny fisafoana mahazatra?
Ny fampiasana drafitra santionany miaraka amin'ny fahazoan-dàlana ekena izay natsangana mba hahazoana antoka ny mpamokatra ny mety hisian'ny ekipa rehefa ny salan'isan'ny fizarana làlana dia tsara noho ny fetran'ny kalitao momba ny fanekena
Hamarino: ampiasaina ny fisafoana ara-dalàna raha tsy misy antony tokony hiahiany. ny dingan'ny fizotrana (3.1.25) dia tsy mitovy amin'ny
Teny fitantanana ny kalitao] inona no fanaraha-maso akaiky?
Ny fampiasana drafitra santionany miaraka amin'ny fahazoana ekena ho malefaka kokoa noho ny natao ho an'ny drafitra mifanaraka
amin'ny fanaraha-maso ara-dalàna Fanamarihana
: Voamarina ny fisafoana rehefa misy ny valin'ny fisavana natao ho an'ny marobe nifanesy izay manondro fa ny tahan'ny salan'isa dia mety ambany noho ny AQL
Teny fitantanana ny kalitao] inona ny tetika fanaovana sampana?
Fifangaroana fandrafetana ny drafitra amin'ny alàlan'ny fiovana amin'ny drafitra iray mankany amin'ny iray hafa
Teny fitantanana ny kalitao] inona ny rafitra sampling?
Fivarotana drafitra fandrafetana, na drafitra santionany, samy manana ny fombany momba ny fanovana drafitra, miaraka amin'ny paikady fanaovana sampan-kitapoka ao anatin'izany ny fitsipiky ny drafitra na tetika mety sahaza.
HITA fa ity ampahany amin'ny ISO 2859 ity dia rafitra santionany notononina tamin'ny faribolana, habe fanaraha-maso ary AQL. Taratasy iray
rafitra ho an'ny drafitra LQ dia omena amin'ny ISO 2859-2.
Fanombohana voalohany, Famakafakana trano, Fandraisana ny fanaraha-maso, Amin'ny fizahana fizahana, Fanaraha-maso feno amin'ny Internet, fanaraha-maso amin'ny ,